Wararka Maanta: Talaado, Sept 25, 2012-Madaxweynaha Kenya oo Hay'adaha Gargaarka ugu baaqay inay Gudaha Soomaaliya ku caawiyaan dadka dhibaateysan
Kibaki oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka oo uu ka furmay shirkii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in deegaanno badan oo ka tirsan Soomaaliya laga saaray Al-shabaab oo horay hay'adaha gargaarka ugu diiday inay ka howlgalaan.
"Waxaan ku faraxsannahay isbedellada siyaasadeed ee Soomaaliya ka dhacay, kuwaasoo ka dhashay fulinta heshiiskii Roadmap-ka. Kenya waxay sidoo kale soo dhaweynaysaa shirarka looga hadlayo Soomaaliya ee dhici doona. kuwaasoo aan rumeysannahay inay qayb ka qaadanayaan gacan-siinta mustaqbalka Soomaaliya," ayuu yiri Kibaki.
Sidoo kale, Kibaki ayaa ka dalbaday xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-Moon in dalkiisa gacan laga siiyo sidii qoxootiga Soomaalida dib loogu celin lahaa dalkooda, gaar ahaan goobaha laga saaray Al-shabaab oo uu sheegay inuu ammaan ka jiro.
Deegaanka Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxaa ku yaalla xeryaha qoxootiga ee dunida ugu weyn, kuwaasoo ay ku jiraan in ka badan nus malyuun qof oo qoxooti Soomaliyeed ah oo ka cararay dagaallada 21-ka sano ka socday Soomaaliay iyo abaaraha soo laalaabtay.
Madaxweynaha Kenya, wuxuu sidoo kale ka hadlay howgallada ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM ay ka wadaan gudaha dalka ay yihiin kuwo Al-shabaab looga xoreeyay dhul ballaaran oo Koonfurta Soomaaliya ku yaalla.
"Shaki iigama jiro in qoysaska Soomaaliyeed ay dib ugu laaban karaan goobahaas la xoreeyay, iyagoo ku noolaanaya nabad iyo deggenaasho," ayuu yiri Kibaki oo ku si adag ugu boorriyay hay'adaha gargaarka inay goobahaas dib uga howlgalaan.
Kenya ayaa waxaa gudaha Soomaaliya kaga sugan kumannaan askari oo horraantii sannadkan ku biiray howgalka Midowga Afrika ee AMSIOM, kuwaasoo dhawaanahan waday dagaallo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Kismaayo oo weli gacanta ugu jirta Al-shabaab.